I-Semalt Iingcali zoLwazi Iluhlu loluhlu lweeWebhu lokuThambisa
Ukuba ufuna ukwakha iwebhusayithi okanye ufuna ukufumana i-RSS feeds eneenkcukacha ezichanekileyo, ezichanekileyo kunye ezichanekileyo, ungasebenzisa uluhlu lweenkcukacha zokucoca kwesikrini kunye neeprogram zokukhutshwa kwedatha.
Ukuba ufuna ukuthatha idatha yemveliso kwiziko lewebhu rhoqo, kufuneka ukhethe iMozenda. Kwaye ukuba ufuna ukukhangela iiforali zokuhamba ezahlukeneyo, ii-media media, kunye nee-newsletters, ngoko u-Uipath noKimono bafanele.
Ngalezi zixhobo ezi-3, unako ukuzenzekelayo iifom zokuzalisa ifom kwaye unokwenza uphando kwi-Intanethi.
. Kulungele ukuba ngubani ofuna ukuphakamisa amashishini abo kunye nedatha ephilayo, kwaye awudingi naluphi na izakhono zokubhala kwi-Kimono. Ingasindisa ixesha lakho kwaye igcwalise iwebhusayithi yakho ngokuchithwa kwedatha. Ufuna ukukhuphela kwaye ufake ifowuni, qinisa izinto zekhasi lakho kwaye unike imizekelo ukuze uKimono enze imisebenzi yakhe ngokufanelekileyo. Yinkqubo yamahhala eneempawu ezahlukileyo kwaye ifanelekileyo kumashishini nakwi-freelancers. UKimono ubhala idilesi yakho kwiifom ze-JSON kunye ne-CSV kwaye udala ama-API kumaphepha akho ewebhu, uwagcine egcinwe kwisiseko sawo ukuze asebenzise. Ayifuni naluphi na ukuhamba kwekhasi kwaye ukhawuleze umsebenzi wakho wokukhipha idatha.
i-Mozenda i-desktop desktop kunye neprogram yokucoca kwesikrini. Kusinceda sitshintshe yonke idatha ukusuka kumaphepha ewebhu angenamkhawulo. Le nkonzo izakuphatha onke amaphepha ewebhu njengomthombo wolwazi, kwaye awudingi naziphi na izakhono zokufunda ukuze uzuze eMozenda. Kuye kucetyiswa yinkalo enkulu yabaprogram kunye neengcali ze-SEO. Kufuneka uhambise iphepha lakho lewebhu uze uMoses enze imisebenzi yakhe. Unokufikelela lula kwi-API ye-Mozenda uze ufumane ulwazi oluchanileyo. Iya kusikhokela kwinkqubo yokucoca kwesikrini ngokusebenzisa izikrini zesikrini kwaye iyakwazi ukucwangcisa amakhulu ukuya kumawaka ewebhu kwiiyure. Le nkqubo kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni naziphi na izakhono zobugcisa. Ngamanye amaxesha, iMozenda inokutshintshela idatha kunye nokucwangcisa iphepha lephepha lewebhu kwiiyure ezingama-24, kwaye yile ndlela kuphela yokusilela kwesi sixhobo.
u-Uipath ugxile ekudaleni amaphepha ewebhu ahlukeneyo kunye nokucwangcisa amaninzi ewebhusayithi kubasebenzisi. Ngenye yezona zinto zithembekileyo kunye neyona ndlela iphezulu yokukhutshwa kwesikrini kunye neenkqubo zedatha. Kufezekisile zombini iikhowudi kunye nabaphuhlisi bewebhu kwaye banokugqithisa ngokulula yonke imingeni yokukhangela idatha njengendlela yokuhamba ngephepha. Akukroxeli kuphela amaphepha akho ewebhu kodwa iifayile zePD. Udinga ukuvula le i-web scraping idizadi kwaye ugxininise ulwazi olufunekayo ukuze uluhlu. I-Uipath iya kutshekisha amawaka ewebhsayithi kwiiyure, ikunike iinkcukacha ezichanekileyo kunye nokuhlaziywa kwiikholamu ezifanelekileyo Source .